Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi Kyle Walker-Peters Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngegama "Kyle". I-Kyle Walker-Peters Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama ezindabeni ezidumile, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali onamandla amakhulu esikhathini esizayo. Kodwa-ke, bambalwa abambheka nge-Kyle Walker-Peters 'Biography okuyinto ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Kyle Walker-Peters Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, igama lakhe eliphelele nguKyle Leonardus Walker-Peters. Wazalwa ngosuku lwe-13th ka-Ephreli 1997 kunina, uMary Walker-Peters nobaba, uDennis Walker-Peters e-Greater London endaweni yase-Edmonton, e-United Kingdom.
U-Kyle wazalelwa emphakathini wamaBlack British owasebenzisa isizinda semindeni ephakathi. Ngokombiko we-intanethi, umndeni wakhe ungasuswa eJamaica.
U-Kyle wakhula njengomfana ozolile futhi ozolile, isici asithola kubaba wakhe, uDennis. Bobabili abazali, uDennis noMariya babe nomkhuba wokugcina indodana yabo igxile futhi baqinisekise ukuthi ulandele indlela efanele, okubandakanya ukuba nemfundo yakhe.
Njengoba ekhula e-Tottenham, umndeni kaKyle Walker-Peter ubenamalungu amaningi ase-Arsenal ngaphandle kwakhe nezihlobo ezimbalwa ezazigqugquzela abaseTttenham.
Isinqumo sikaKyle Walker-Peters sokuba ngumqeqeshi sivela kumalume wakhe, uFiliphu Leonardus Walker owayengumdlali wezemidlalo owake waba yingcweti noMillwall noCharlton Athletic.
Manje e-60 yakhe ngesikhathi sokubhala, uPhillip owaba ngumqeqeshi webhola wakhuthaza umshana wakhe uKyle ngokuhlanganyela emisebenzini yebhola esemncane. Uthole isithakazelo ebhola likanobhutshuzwayo, uFiliphu waqinisekisa ukuthi umshana wakhe ulandela indlela enhle njengoba efuna ukusekelwa ngokugcwele kwabazali bakhe abavumelene nesimo sokuthi indodana yabo ayinandaba nokuqeqeshwa kwebhola.
Kyle Walker-Peters Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Uthando lukaKyle ngebhola lomdlalo lwambona ebhalisa futhi enesilingo esiphumelelayo noSpurs njengomphakathi ohlasela. U-Kyle wayengeke ajoyine iTittenham uma engatholi usizo kumngane kaMalume wakhe uBryan King owayengumgcini wakhe wangaphambili kanye neqembu lakhe eWillwall. U-Bryan manje ongu-71 (njengesikhathi sokubhala) wayengumseshi ku-Spurs ngesikhathi uKyle Walker-Peters asizwa.
Ngesikhathi uKyle eqala eTottenham, akazange anqotshwe njengomunye wabadlali abakhulu kakhulu eqenjini lakhe. Kodwa-ke, ukuphila esikoleni sikaTottenham kwakumnandi ekuqaleni. Ngemva kwesikhathi eside, uKyle waphawula ukuthi kwakudingeka enze imihlatshelo eminingi. Kwakukhona izikhathi okwakudingeka abe yedwa kuphela etholakalayo engekho kumaqembu okuzalwa. UKyle Walker-Peters wayenelisekile ngokuphila kwakhe ngoba wayezwa ukuthi wenza lokho akuthandayo; lokho "Ukudlala ibhola."
Ukuphatha Ukuphila Kwakhe Okuqala Nge-Spurs:
Kwelinye ukuphatha impilo yakhe, u-Walker-Peters kwadingeka aphile emgodini nomngane ophethe. Wahlala noMizlos Veljkovic, umdlali waseSerbia (odwetshiwe ngezansi) odlala noWerder Bremen njengesikhathi sokubhala.
"Ukuhlala noMilos Veljkovic kwangisiza ukuba ngizimele. Kwakudingeka ngizihlanze futhi ngiziphephe ukudla kwami ​​kwasekuseni. Okuhlangenwe nakho okufana nalokhu kusiza ngempela. " kusho uKyle Walker-Peters
Ngenkathi uKyle ethuthuka eminyakeni yobudala, abazali bakhe baqhubeka befaka imfundo kuye ukuqinisekisa ukuthi uyiqedile izinga. Ngokusho kukaKyle ...
"Ngagxila emfundweni ngenkathi ngidlala ibhola kuze kube yilapho ngifika iminyaka engu-16. Ngenza isiqiniseko sokuthi ngithole amamaki amahle. Ngemva kwalokho, ngangikwazi ukugxila kuphela ebhola lami futhi lokho kwangisiza ngempela. "
Ngemuva kwemfundo yakhe, sekuyisikhathi sokuba uKyle alwe nendlela yakhe yokuthola inkontileka yezisebenzi neTottenham. Lokhu kwavela isahluko esisha ekuphileni kwakhe komsebenzi.
Kyle Walker-Peters Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane- Umgwaqo Wokudumisa
Ukuthatha ithimba lakhe njengezitha:
Kwaba nzima kangangokuthi ngisho nohlala naye uKyle Walker-Peter uMloš Veljković wenziwa ukuncintisana naye nabanye abadlali endaweni ethile eqenjini le-Spurs lentsha. Kwakukhona abadlali abaningi abadlala endaweni efanayo okubonisa okunye okudingekayo ku-Spurs izidingo. Ngakho-ke, ukuncintisana kwaba yisisekelo nesisekelo esibalulekile ekusungulweni kwesikole seSpurs.
"Ngizama ukuthuthukisa ekusebenzeni kwami ​​okwakuyindlela yokuthola abanye abadlali esikhundleni sami ngaphandle kweqembu. Ubaba wayeyithonya elikhulu. Uzohlala ethi, 'azikho abangane ebhola, ungaba nobungane, kodwa ngeke ube nabangani'. Kusukela ngaleso sikhathi, ngabona ukuthi kwakudingeka ngibe nobugovu. " kusho uKyle Walker-Peters I-FourFourTwo Umbiko.
Kyle Walker-Peters Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane- Ukuphakama Ekudumeni
Lapho efunda ukuzivikela nokuphila kwendalo, uKyle Walker-Peters wazibonela phambili ngokushesha futhi okwaholela ekubeni ahlonishwe ngamazwe neNgilandi ngaphansi kwe-18s ne-Under-19s.
Uyakwazi ukusingatha izinto ngisho nasezimo ezinzima ngokucindezela okuqhubekayo ukuba abe yingxenye yomdlalo wakhe konke egameni lenkontileka yobuchwepheshe.
Kuwo wonke u-Walker-Peters uhambo lokuthola inkontileka yezobuchwepheshe, omunye umuntu ohloniphekile uzohlala ebonga ngokuthi akekho omunye u-Ugo Ehiogu osekupheleni kwesikhathi owayengumqeqeshi weqembu leTottenham Hotspur U23. Ngokudabukisayo, u-Ehiogu washona ngo-21st ka-Ephreli 2017 ngemuva kokuboshwa komzimba e-Spurs.
Ngemva kwenyanga ngemuva kokufa kwakhe, umncintiswano wekomidi lomhlaba we-U20 weza wabiza uKyle Walker-Peters wakhethwa ukumela uNgilandi. Uhlangana nabalingani beqembu, ikakhulukazi i-Chelsea I-Callum Hudson-Odio wasiza i-England ukuba iqinisekise i-Under-20s World Cup.
Ethonywe yi-U20 World Cup ukunqoba kwakhe, u-Walker-Peters wakha isiteleka esingenabuhlungu esikoleni sakhe. Nge I-Kieran Trippier kufanele uphathe inkinga yokugula futhi USerge Aurier U-Walker-Peters wabona njengomdlali ohamba phambili kulesi sikhundla. Ekugcineni, Mauricio Pochettino wenza amaphupho akhe agcwaliseke njengoba ebiza u-Walker-Peters ukuba asayine inkontileka yakhe yokulindela isikhathi eside neTottenham Hotspurs yakhe ethandekayo.
Kyle Walker-Peters Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane- Ukuphila Ubudlelwano
Ngubani uKyle Walker-Peters Girlfriend?
UKyle Walker-Peters ungomunye wabalandeli bebhola labo abathandana nabo abahlukumezekile ngeso lengqondo yomphakathi nje ngoba konke kuyimfihlo noma kungenzeka ukuthi akukhona okwamanje. Bambalwa kakhulu abasha be-English footballer bobuhlobo babo obuhamba phambili kakhulu. Isibonelo esiphelele ngu Declan Rice.
Kyle Walker-Peters Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane- Ukuphila Personal
Ukukwazi ukuphila komuntu siqu kaKyle Walker-Peters kuzokusiza ukuba uthole isithombe esiphelele ngaye.
Ukufakazela ukuthi ulungile ngokwanele kube yisifingqo sezindaba zikaHater-Peters. Lokhu kuhlangothini lomsebenzi. Kodwa-ke, ngencwadi yomuntu siqu, u-Walker-Peters uboniswe ukuthi ulungile ngokwanele ku-console ye-PlayStation.
UKyle Walter-Peters akagcini nje ukudlala ibhola noma imidlalo yevidiyo. Uyaziqhenya ngokuzijabulisa wezemidlalo yena kanye nabalingani bakhe beSpurs nabasebenzi bakhe abavakashele futhi banikele usizo elincane ilungelo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Kyle Walker-Peters Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.